अपराध संहिताप्रति चिकित्सकहरूको आपत्ति किन ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण अपराध संहिताप्रति चिकित्सकहरूको आपत्ति किन ?
on: २२ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०६:३४ लेख | दृष्टिकोण
अपराध संहिताप्रति चिकित्सकहरूको आपत्ति किन ?
भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ प्रति चिकित्साकर्मीहरूको चरम असन्तुष्टि देखिएको छ । वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले गर्दा बिरामीको उपचार नै गर्न नसकिने र चिकित्सकलाई अपराधीका रूपमा हेरी ऐन ल्याइएको भन्ने जिकीर चिकित्सक सङ्घलगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूको छ ।
अहिले कार्यान्वयनमा आएको मुलकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा विगतमा धेरै वर्षदेखि नेपाल कानूनमा रहेको रिक्तता, अव्यावहारिकता र अन्योललाई चिर्ने काम गरेको छ । विसं २०२० सालको मुलकी ऐन देखि विसं २०७५ सालसम्म करीब ५० वर्षको लामो कालखण्डमा विश्वजगत्, सामाजिक चिन्तन, व्यवहार र संस्कारमा आएको परिर्वतनका साथै विज्ञान प्रविधिमा आएको विकासको प्रभावले वर्तमान ऐनमा धेरै हदसम्म अङ्गीकार गरेको छ । यो मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को पर्याप्त अध्ययन, छलफल र विश्लेषण हुन आवश्यक छ । अहिले अध्ययन कम मनोमानी अर्थ लगाउने धेरै देखिएका छन् । कतिपय चिकित्सकको प्रतिक्रिया सञ्चारमाध्यममा सुन्दा अर्थ न बर्थ सातो गएको हो कि भन्ने प्रतीत हुन्छ । ऐनको परिच्छेद १९ मा इलाजसम्बन्धी कसूरको व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी सो परिच्छेदको दफा २३१ र दफा २३२ मा चिकित्सक सङ्घको आपत्ति रहेको देखिन्छ ।
ऐनले बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने कुरा यस दफामा छ । कसैले कसैको ज्यान मार्न नहुने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले उपचार गर्न, एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिश गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा सो थाहा पाउनुपर्ने उपयुक्त कारण भई त्यस्तो औषधि खुवाउन वा खान सिफारिश गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अङ्गको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अङ्ग चिरफार गर्न वा त्यस्तो अङ्ग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्ने काम गर्न गराउन हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । यस्तो कसुर गरेमा क) कसैको ज्यान गएकोमा ज्यान मारेसरह, (ख) कसैको अङ्गभङ्ग भएकोमा अङ्गभङ्ग गराएसरह कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै दफा २३२ मा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गर्न नहुने व्यवस्था छ । कानूनबमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होशियारी वा सावधानी नअपनाई लापरबाही वा हेलचक्र्याइँ गरी इलाज गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिश गर्न वा चिरफार गर्न हुँदैन । यस्तो कामबाट कसैको ज्यान मर्न गएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा लापरबाहीपूर्ण काम गरेका कारणबाट ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना र हेलचक्र्याइँ गरेको कारणबाट मरेकोमा वा अङ्गभङ्ग भएकोमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
सबै पेशाकर्मी व्यावसायिक आचरण र मर्यादाभित्र ठीक हुन पनि सक्छन् नहुन पनि सक्छन् । चिकित्सक सङ्घले भन्ने गरेको डाक्टरको काम नै बिरामीको उपचार गर्नु हो, प्राण बचाउनु हो भने यो ऐन कसरी बाधक भयो ? ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ ‘बदनियत चिताई’ उपचार गर्न नहुने । अमर्यादित काम गर्ने डाक्टरहरूप्रति लक्षित यो ऐनबाट चिकित्सक सङ्घ खुशी हुनुपर्ने हो । अब बिरामी, बिरामी मात्र होइन, सेवाग्राही पनि हो । अब कोही सर्वसाधारण डाक्टरकोमा जाँदा ऊ बिरामी नै हुनुपर्ने भन्ने परम्परागत मान्यता रहेन । डाक्टरलाई भगवान्को रूपमा मान्न अहिलेको नयाँ पुस्ता तयार छैन । उपचारका लागि जाँदा सेवाग्राहीले निश्चित शुल्क तिरेकै हुन्छ । सेवाग्राहीलाई राम्रो उपचार दिनु डाक्टरको कर्तव्य हो भने सेवाग्राहीको अधिकार । बिमारीको गलत फाइदा उठाएर अनावश्यक महँगो स्वास्थ्य परीक्षण गरिने गरेको तथ्य पनि बारम्बार आइरहने विषय बनेको छ । एउटै डाक्टरले सरकारी अस्पतालमा जागीर खाएर बिरामीलाई गर्ने उपचार र उही डाक्टरले निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा गर्ने उपचार कति फरक छ ? सर्वसाधारणले सहजै भोग्दै आएको विषय हो । औषधि कम्पनीहरूको कमिशनको लालसामा सोही कम्पनीको औषधि बिरामीलाई लेखिँदै आएको नयाँ कुरा होइन ।
एकजना डाक्टरले एउटा घुँडाको अपरेशन गर्नुपर्नेमा अर्को घुँडाको शल्यक्रिया गरेको बहुचर्चित घटना कसरी भूल हुन सक्छ ? लापरबाही पूर्ण गरिएको यस्तो अपरेशन कुनै पनि बहानामा भूल हुन सक्दैन । अर्को भारतमा नाम चलेका व्यवसायी विजय माल्याको लगानी रहेको एयर एशियाको एक उडानका क्रममा एक यात्रुलाई शाकाहारी भोजन माग गरेकोमा मांसहारी भोजन दिइएको विषयमा भारतीय अदालतले लापरबाही नै ठहर गरी पीडित पक्षलाई ठूलो रकम क्षतिपूर्ति दिलाइदिएको प्रसङ्ग मननयोग्य छ ।
यो ऐनको मुख्य पाटो भनेको ‘जवाफदेही’ हो । कुनै पनि पेशाकर्मी सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ । कुनै पनि व्यावसायिक पेशाकर्मीले आफ्नो ज्ञान, शीप, क्षमता र अनुभवले भ्याएसम्म राम्रो काम गर्ने हो । जब त्यसमा बढी पैसाको तृष्णा वा नैराश्य वा बढप्पन हावी हुन्छ अनि त्यसमा समस्या देखिन थाल्छ । बिमारीको पहिचान नै नगरी तथा गलत उपचारका कारणले दुःख पाएका बिरामीहरूको आवाज अब बिस्तारै उठ्न सक्ने स्पष्ट छ ।
के संसद्ले कुनै ऐन बनाउँदा सरकारले सम्बन्धित पेशाकर्मीसँग परामर्श लिनैपर्ने हो ? के सबै ऐन व्यवसायीले भनेअनुसार उनीहरूकै अनुकूल बनाउनुपर्ने हो ? ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो । यो ऐन आयो भन्दैमा चिकित्सक सङ्घको होशहवास उड्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यदि ऐनमा भएको व्यवस्थाउपर उपचारका लागि कोही अदालत आएमा त्यसको सम्पूर्ण शल्यक्रिया न्यायिक प्रक्रियाभित्र हुन्छ नै, कसैले माग दाबी गर्दैमा उसले जे भन्छ त्यही स्वतः फैसला हुने हो र ? यो एउटा शुरुआत मात्र हो । चिकित्सक मात्र होइन, इञ्जिनीयर, वकिल, पत्रकार, व्यापारी जो कोही पनि सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ । यही सङ्गठनको बलको भरमा व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्ने गलत प्रवृत्तिको विकास गर्दै लगेमा निरीह उपभोक्तालाई मर्का पर्दा उपचारका लागि कहाँ जाने ? सोचनीय विषय छ ।
लेख सान्दर्भिक र लेखकले राखेका बिचार सहिछन ।हाललागु ऐनले सबै पेशाब्यबसायलाई मर्यादित जिम्मेवार र जबाफदेही पूर्ण बनाउने तर्फ लक्षित रहेकाे पाइन्छ ।ऐनका प्रावधानहरु ब्यबहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा नअाइसक्दै बिराेध गर्नु भनेकाे “चाेरकाे खुट्टा काट”भन्दा तर्सेकाे जस्ताे बुझ्नुपर्ने भयाे ।
LeaveaReply to धर्म अाचार्य Cancel Reply